Dareen ka dhashay gabadh meydkeeda laga heley Qabri-Dahare - BBC News Somali
12 Maajo 2018
Image caption Taysiir Cumar Maxamed waxay ahayd gabadh 20 jir ah oo meydkeeda laga heley Qabri-Dahare
Wararka ka imanaya magaalada Qabri-dahare ee dhulka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in haweenay dhallinyaro ah meykeeda laga heley meel saldhig ciidan ah oo sida la sheegay lagu xiray mar sii horeysay.
Maxamed Xiis Kallane oo gabadha adeerkeed ah, kuna sugan magaalada Pretoria ee Koonfur Afrika ayaa BBC-da u xaqiijiyay geerida gabadha, wuxuuna sheegay in gabadha ay qabteen ciidanka maamulka, saacado markii ay hayeena ay reerka ku wargaliyeen in ay is dishay.
Maxamed Xiis waxa uu intaas ku daray in xalay gabadha meydkeeda la geeyay isbitaalka ciidammada federaalka, kadibna lasoo xaqiijiyay in la dilay.
Somaliland oo xabsiga ka siidaysay abwaanad Naciima Qorane
Maxay tahay waxa Somalilan au u haysata Naciima Qorane?
Lama oga sababta loo xirey markii horeba, iyo waxa sababay dhimashadeeda. Waxaase la sheegay in arrintan ay ka dhacday xero ay ciidamada ku leeyihiin magaalada.
"Qoladan meesha joogta, kuwa wax maqlaya ma ahan, baaqna looma diri karo, dhibaatadan alle ha naga dulqaado, tii ugu horeysay ma ahan, tii ugu dambeysayna ma ahan, dilkana hala joojiyo, waa ceeb kusoo korortay Soomaalida" ayuu yiri Maxamed Xiis Kallane oo ku hadlay magaca qoyska gabadha ay ka baxday.
Image caption Maxamed Xiis Kallane, oo gabadha adeer u ah
Maamulka dowlad deegaanka ayaanan weli wax war ah kasoo saarin dhacdada Taysiir.
Baraha bulshada ayaa aad loogu faafinayaa qoraalo iyo haddalo looga soo horjeeda falka dhacay, waxaana arrintan ka dhashay dareen carol eh.
Nin xaaskiisa ku dilay Kismaayo
Dacatiyada ka dhanka ah dumarka waa mid isa soo taraya maalmahan, bishii hore nin ka tirsan ciidanka Jubbaland ayaa xaaskiisa toogasho ku dilay magaalada Kismaayo.
Askarigan oo lagu magacaabo Cabdullaahi Asad ayaa waxaa wali dacwadiisa gacanta ku haya laamaha ammaanka iyo kuwa garsoorka Jubbaland, welina go'aan kama dambeys ah lagama gaarin dilka Muxibo Maxamed Guurre.
Alshabaab oo haweenay dillay
Kooxda Al-Shabaab ayaa meel fagaare ah oo ku taalla degmada Sablaale ee gobolka Shabeellaha Hoose dhagax ku dilay gabadh ay sheegeen inay hal mar wada guursatay 11 nin.
Dad maxkakamada Alshabaab dhaliila ayaa su'aal galinaya hufnaanta hannaanka cadaaladooda iyaga oo farta ku fiiqay in aan inta badan war lagahaynin meesha dadka lagu xukumo oo lagu baraarugo marka xukunka la fulinayo oo kali ah.
Dhawaan maamulka Somaliland ayaa xasbiga ka siidaayay abwaanad Naciimo Qorane kadib markii lagu eedeeyay in ay ku kacday ficilo ka dhan ah Somaliland.
Afhayeenka madaxtooyada Jamhuuriyadda Iskeed ugu dhawaaqday Madaxbannaanida ee Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac, ayaa sheegay in abwaanad Namiica Axmed Qorane oo hore maxkamadda gobolka Hargeysa ugu xukuntay saddex sano oo xarig ah laga sii daayay xabsiga Gebilley, kaddib markii uu cafis u fidiyay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
Xarigga Naciima ee dabayaaqadii bishii Jannaayo ayaa yimid kaddib markii ay ka soo noqotey safar ay ku tagtay magaalada Muqdisho, oo ay kaga qeyb gashey barnaamij ay qabaneysay warbaahinta TEDx.